सफल हुन चाहने मान्छेहरुले बिहानको ८ बजे अगाडी गर्नु पर्ने ८ कुराहरु - उज्यालो पाटो
अहिलेको पुस्ताका लागि बिहानको ८ बजेको समय भर्खर बिहान हुँदै गर्ने समय हो । अहिलेको पुस्ता राती भरसक सुत्न चाहदैन र बिहान उठ्न चाहदैन । यो अहिलेको पुस्ताको विशेषता हो । सायद राती एकाग्रता बढि हुन्छ, सायद राती इन्टरनेट राम्रोसँग चल्छ, सायद पब्जीमा पनि राती पिङ कम हुन्छ । राती ढिलो सुत्नुका कारणहरु खोज्ने हो भने यस्ता धेरै सायदहरु भेटिन्छन् ।
यदि तपाई सोच्नु हुन्छ कि सामाजिक साइट तथा इन्टरनेटले विश्वलाई सानो गाउँ बनाइदिएको छ र नेपालमा भएका युवापुस्ताहरु अन्य देशमा भएका साथीभाई तथा आफन्तहरु कुरा गर्न अबेरसम्म बस्छन् तर तपाईको यो सत्यता आंशिक मात्र सत्य हो । नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि अहिलेको पुस्ता रात परेको थाहा पाउँदैन । संसारभरकै अहिलेको पुस्ता भोली बिहान उठ्नै पर्ने बाध्यता भएर मात्रै निदाउँन तयार हुन्छ ।
तर हामी सबैलाई थाहा छ, यो जीवनशैली सहि होइन । हामीले राती बेलामा सुत्ने र बिहान सबेरै उठ्ने कुराका फाइदाहरु पहिलेदेखि नै सुनिरहेका हौँ । पुर्विय दर्शनमा ब्रम्ह मुर्हुत अर्थात् बिहान घाम झुल्किनु भन्दा अगाडी उठिसक्नुको फाइदाका बारेमा धेरै व्याख्याहरु पाइन्छन् त्यस्तै अंग्रेजीमा पनि भनाई छ – ‘अर्ली टु बेड अर्ली टु राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एण्ड वाइज’ । अंग्रेजी भाषाको यो भनाई निकै पुरानो हो । यसको अर्थ यो हो कि बेलुका चाँडै सुत्दा र बिहान सबेरै उठ्दा मानिस स्वस्थ, सम्पन्न र बुद्धिमान बन्छ ।
वास्तवमै बिहान चाँडै उठ्दाका धेरै फाइदा छन् । फाइदा यसकारण कि हामीले दिन सुरु हुने बित्तिकै तयार हुने अवसर पाउँछौँ । बिहान चाँडै उठेर मात्रै हुन्न, बिहान उठे पछि केहि कामहरु पनि गर्नु पर्छ जसले गर्दा तपाईलाई फाइदा हुन्छ । नत्र बिहान सबेरै उठेर मात्रै फाइदा हुने भने होइन । यहाँ त्यस्तै केहि कुराहरु संकलन गरिएको छ, जसलाई बिहान ८ बजे अगाडी गरिसक्नु भयो भने तपाईलाई सफल हुन सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।
१. शरिर चलाउँने
शरिर चलाउँने अर्थात् कसरत गर्ने । सामान्यतया हामी धेरैका लागि कसरत गर्नु भनेको काम हो, त्यो पनि असाध्यै गाह्रो काम । र, कतिपयका लागि कसरत गर्नु भनेको जिममा गएर भारी कुराहरु उठाउँनु । तर कसरत गर्नु भन्नाले त्यति कुरामात्रै होइन । एउटा नियमबद्ध तरिकाले सामान्यरुपमा शरिर चलाउँने हो भने पनि त्यसले हाम्रो शारिरिक कसरत हुन्छ ।
सम्झनुहोस् त, दिनमा कति समय तपाईले आफ्नो शरिरका लागि लगानी गर्नु हुन्छ ? यदि शरिरका लागि लगानी गर्नु भयो भने तपाईले जिन्दगीमा सबै भन्दा असल र सहि उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ । शरिरका लागि लगानी गर्नु भन्नाले महंगा पहिरन वा श्रृंगार होइन । बरु कसरत लगायतका कुराहरुको लागि समय दिनु हो । बिहान सबेरै उठेर दिनमा १ घण्टा मात्रै कसरत गर्ने हो भने शरिरको ढाँचा परिवर्तन हुन्छ । शरिरमा रक्तसञ्चार राम्रो हुन्छ । मस्तिष्क ताजा र सक्रिय बन्छ । यसले गर्दा तपाईमा सकारात्मक चिन्तन बढ्छ, तपाई सृजनशील बन्नुहुनेछ र तपाईमा जाँगर र उत्पादनशीलता पनि बढ्नेछ ।
यसैले बिहान ८ बज्नु भन्दा अगाडी शरिर चलाउँने नियमित बानी बनाउँन सके उत्तम हुन्छ ।
हामी मानव समाजको यस्तो समयमा छौँ, जहाँ हामीमा क्षमता भन्दा बढि चाहना छ, हामीले पाउँन सक्ने भन्दा धेरै सम्भावनाहरु देखेका छौँ र थाम्ने भन्दा बढि जानकारीहरु समेटेका छौँ । यी कारणहरुले गर्दा हामी सामान्य अवस्थामा बढि एकलकाँटे छौँ, दुखी छौँ र क्रियाशिल पनि छौँ । हामीलाई अनुपात्दक हुने र रोकिने समय छैन । हामीलाई दगर्नु छ, हामीलाई जित्नु छ । हिजो भन्दा आज राम्रो हुनु छ र त्यसको गति पनि हिजो भन्दा आज बढि हुनु छ ।
यसले शारिरिक मात्र होइन, मानसिकरुपमा पनि हामीलाई गलाएको छ । यी सबै कुराहरुबाट केहि समय दिमागलाई टाढा राख्न सकियो भने हाम्रो दिमाग झन् तरोताजा हुन्छ । यसका लागि ध्यान सबै भन्दा राम्रो उपाय हो । पुर्विय दर्शनमा केहि हजार बर्ष पहिले नै ध्यानको बारेमा धेरै अनुसन्धानहरु भएका छन् । हामी सबैलाई कसरी ध्यान बस्ने भन्ने धेरथोर जानकारी पनि छ । यसैले थप बिधिहरु थाहा पाएर बिहान केहिबेर ध्यान बस्दा हामी थप रचनात्मक र क्रियाशिल हुन सक्छौँ ।
३. रणनीति बनाउँने
बिहान चाँडो उठ्नुको अर्थ हो, हामी दिन सुरु हुँदा आज के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सक्छौँ । यसैले बिहान उठेर ८ बजिसक्नु अगाडी नै विशेष अवस्था बाहेकका समयमा मेरो दिन यसरी बित्नेछ भनेर खाका तयार पार्न सक्छौँ । त्यस्तै, आवश्यकता अनुसार दिनभरको लागि रणनीति तयार पार्न सक्छौँ । तयारी अवस्थामा रहेकाले बिषम परिस्थितिसँग जुध्न पनि सजिलो हुन्छ । यसले मानिसलाई सफलताको बाटोमा डोहोर्याउँछ ।
४. थिति बसाउँने
दिनभर गर्नु पर्ने कामहरुका बारेमा हामीलाई अघिल्लो दिन पक्का पनि थाहा हुन्छ । कुनै अपर्झट हुने कुराहरुलाई अलग गर्ने हो भने नियमित दिनमा गरिने कामहरु के के हुन्छन् भनेर हामी सूची बनाउँन सक्छौँ । यसैले बिहान चाँडै उठेर दिनभरका कामहरुको थिति बनाउँनुहोस् । एउटा पद्दति बसाउँनुहोस् । दिनलाई जे पर्छ, त्यहि टर्छ भनियो भने भद्रगोल हुन्छ र हामी आत्तिन्छौँ । हाम्रो दिन त्यहि भद्रगोल मिलाउँदा मिलाउँदै बित्छ । यस्तो भयो भने कति बेला सृजनशील हुनु ! कति बेला कामहरु गर्नु ! कति बेला नयाँ विचार दिमागमा आउँनु ! यसैले बिहान उठेर दिनभरको थिति बसाइयो भने हामीलाई कामहरुमा केन्द्रिकृत हुन सजिलो हुन्छ ।
५. एक घण्टा तयार भइसक्ने
तपाईको बिहानै कतै जाने काम छ ? त्यस्तो भयो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ ? धेरैको के बानी हुन्छ भने बिहान चाँडै उठ्नु छ भने बेलुका मोबाइलमा अर्लाम राखिन्छ । समयको लेखाजोखा गरिन्छ । जस्तै बिहान ७ बजे कतै पुग्नु पर्ने छ । अर्लाम् राख्नु भन्दा अगाडी हिसाब हुन्छ । ७ बजे पुग्नु छ, १० मिनेट ढिलो पुगे पनि केहि बिग्रिदैन । पुग्न ३० मिनेट लाग्छ, यसैले ६ बजेर ४० मिनेटमा हिडिसक्नु पर्छ । बाथरुममा १० मिनेट लाग्छ । लुगा लगाउँन बढिमा ५ मिनेट । यसैले ६ बजेर २५ मिनेटमा उठियो भने समय पुग्छ तर अर्लाम् लगाउँछु ६ बजेर २० मिनेटको । ५ मिनेट थप समय ।
हामीलाई यस्तो हिसाब पक्का जस्तो लाग्छ तर यसै पनि हामीले १० मिनेट ढिलो पुग्ने हिसाब गरेका हुन्छौँ र त्यसमा अर्को कोही बाथरुम गइदियो भने हाम्रो समय मिलान चौपट हुन्छ । यस्ता अफ्ठ्याराहरुबाट बच्न कतै निस्कनु भन्दा एक घण्टा अगाडी पुर्णरुपमा तयार भइसक्ने गर्यौँ भने न घरमा हतार हुन्छ, न सडकमा हतार गर्नु पर्छ । र, हतारले राम्रो नतिजा ल्याउँने सम्भावना कम हुन्छ ।
६. केहि खाने र प्रशस्त पानी पिउने
बिहानको खानालाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ ? ब्रेकफास्ट । यो त अति नै सामान्य प्रश्न भयो । सबैलाई थाहा हुन्छ तर के तपाईलाई थाहा छ, वास्तवमा बिहानको खानालाई ब्रेकफास्ट किन भनिन्छ ?
बिहानको खानालाई अंग्रेजीमा ब्रेकफास्ट भन्नुको अर्थ छ । ब्रेकफास्टमा भएको फास्ट शब्द अंग्रेजीको फास्टिङ शब्दसँग सम्बन्धित छ । फास्टिङ अर्थात व्रत । हामीले बेलुका खाना खाए पछि बिहानसम्म केहि खाएका हुदैनौँ । अर्थात् बेलुका पछि हामी बिहानसम्म निकै लामो व्रतमा हुन्छौँ, बिहानको खानाले हामी त्यो व्रत अर्थात फास्टिङलाई तोड्छौँ अर्थात अंग्रेजीमा ब्रेक गर्छौँ । यसैले व्रतलाई तोड्ने भएर ब्रेकफास्ट भनिएको हो । यसैले बिहानको खाना एकदमै महत्वपुर्ण हुन्छ ।
व्रत पछि खाइने भएकाले केहि हल्काफुल्का र स्वस्थ खाना खानु पर्छ र प्रशस्त पानी पिउँनु पर्छ । राती पानी शरिरले उपयोग गरिरहेको हुनाले हाम्रो शरिरमा पानीको मात्रा अपुग भएको हुन सक्छ, त्यसका लागि पिउँनु पर्ने हो प्रशस्त पानी । यसले हामीलाई ग्यास्ट्रिक लगायतका समस्या पनि समाधान गर्छ । हाम्रो शरिर स्वस्थ बनाउँछ ।
७. सबै भन्दा गाह्रो कामलाई निप्ट्याउँने
दिनभर गर्नु पर्ने धेरै कामहरु हुन्छन् । ति कामहरु मध्यै गर्नका लागि सबै भन्दा सजिलो काम छान्दा दिनको सुरुवात राम्रो हुन्छ तर दिनको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने चै निश्चित हुदैन । किनकी तपाईको सबै भन्दा गाह्रो काम जसले तपाईको समय लिन्छ र मिहिनेत चाहिन्छ, त्यो चै बाँकी नै हुन्छ । गाह्रो काम अनि कम समयले तपाईमा तनाव थप्छ । दिनको अन्त्य बिग्रिने सम्भावना बढि हुन्छ ।
यसैले कामलाई मकै छोडाएको कुरासँग तुलना गर्नुहोस् । तपाईले केटाकेटीहरुसँग बसेर कहिलै मकै छोडाउँनु भएको छ ? छ भने तपाईले भोग्नु भएको छ । केटाकेटीलाई मकै छोडाउँन दिनु भयो भने पक्कै पनि एउटा रेखा छोडाएर बाँकी उनीहरुलाई छोडाउँन दिइन्छ । यसलाई बाटो बनाउँनु पनि भनिन्छ । यसरी छोडाए पछि केटाकेटीहरुले सजिलो गरेर पुरा मकै छोडाइसक्छन् । जसरी मकै छोडाउँदा सबै भन्दा पहिले एउटा रेखा छोडाइन्छ तर त्यो रेखा छोडाउँन गाह्रो हुन्छ । त्यसरी नै सबै भन्दा गाह्रो काम थाल्ने हो भने अफ्ठ्यारो कामका लागि समय पनि प्रशस्त हुन्छ । त्यस्तै सबै भन्दा गाह्रो काम पहिले सकेर दिन सुरु गर्ने हो भने दिनभर हल्का अनुभव गरिन्छ ।
८. लक्ष्य र योजनाका बारेमा बोल्ने
बिहान चाँडै उठेर कसरत लगायतका कुरा पछि परिवारका सदस्यहरुसँग दिनभरका कामका बारेमा कुरा गर्ने हो र त्यसको रणनीतिका बारेमा कुरा गर्ने हो भने आफुले सोचे भन्दा फरक कुरा थाहा पाउँन सकिन्छ । आफ्नो योजनामा के कमजोरी छ भन्ने पनि पत्ता लाग्छ । परिवारका सदस्यले योजनामा केहि गडबडी देखे सचेत गराउँन समय पाउँछन् । त्यस्तै आफुले पनि त्यसको कमजोरी बारेमा सोच्न र परिवर्तन गर्न समय पाइन्छ ।
त्यस्तै बिहानै परिवारसँगको भेटघाट र अन्तर्क्रियाले परिवारिक वातावरण पनि राम्रो बन्छ । यसले आफुले गरेको काममा परिवार सहयोगी बन्छ । सफलताका पहिलो सुत्र परिवारको साथ पाउँनु हो । यसका लागि बिहानै आफ्नो लक्ष्य र योजनाका बारेमा कुरा गर्नु फलदायी हुन्छ ।